Ukwehla kweLab Chow Mix: Okudingeka Ukwazi - Izinhlobo
Ukwehla kweLab Chow Mix: Okudingeka Ukwazi
Uyabona onobungane futhi odlalayo ILabrador retriever nokuzimela nokuziqhenya Chow Chow ukuzwana njengabangane? Ungacabanga ukuthi i-crossbreed yalezi zinja ezimbili?
Kungaba okunye kokubhangqa okumangazayo emhlabeni wezinja zomklami, kepha ukuxuba kweLab-Chow nakanjani kuyayenza isebenze.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngamanye amaqiniso abalulekile ngaleli liwele, elibizwa nangokuthi i- I-Chabrador . Nalu lonke ulwazi odinga ukukwazi ngaphambi kokuthola le ngxubevange.
Kuyini ukuxuba kweLab Chow?
Ngabe ukuhlanganiswa kweLab Chow kubukeka kanjani?
Buyini ubuntu beChow Lab Mix?
Ulukhombisa kanjani uthando kumxube wakho weLab Chow?
Izinkinga ezingaba khona zezempilo zeLab Chow Mix
Ukuqeqesha inhlanganisela yeChow Lab
Ungayitholaphi ingxube yakho yeLabrador Chow
Ingabe kufanele uthole i-Chabrador?
Ukuhlanganiswa kweLab-Chow yisiphambano sesizukulwane sokuqala se- ILabrador retriever (Lab) kanye no Chow Chow .
Izinhlobo zayo zabazali sekunesikhathi eside zikhona, kodwa le nja isanda kuqhamuka endaweni yesehlakalo.
Ngokuya ngemvelaphi yabo, esikwaziyo kuze kube manje ukuthi lezi nzalo zaqala ukukhuliswa e-United States.
Ngokushesha bathola ukuthandwa ngabanikazi ngenxa yabo Fluffy, ukubukeka Yinhle .
Uma kukhona igama elilodwa lokuchaza ukuthi yini iLab Chow Mix, kungaba njalo okungaqondakali .
ILabrador neChow Chow izinhlobo ezimbili ezingafani; empeleni, zingahle ziphikisane ngqo ngokubukeka nangesimo.
Ngenxa yalokho, ngisho nemidlwane evela kudoti ofanayo kungenzeka bheka futhi uziphathe ngendlela ehlukile omunye komunye.
Njenganoma iyiphi i-crossbreed, indlela enhle yokufunda ngomxube weChow Chow neLab kungabazali bayo.
Ake sithole umbono ongcono wokuthi le hybrid yaqhamukaphi ngokubheka umlando weLab neChow Chow.
I-Chinese Chow Chow yasendulo
AmaChow Chows ngokudabuka avela eMongolia nasengxenyeni esenyakatho yeChina, lapho abizwa khona futhi iculohi quan , okushoyo Inja 'puffy-lion' .
E-China, lezi zinja ezi-fluffy zithole ingxenye yazo efanelekile yama-monikers, kufaka phakathi hei shi-tou (“Inja yolimi olumnyama”), xiang gou ('Inja yebhere'), futhi I-Guangdong gou ('Inja ye-Canton').
Ama-chows anjalo enye yezinja ezindala kunazo zonke emhlabeni futhi kucatshangwa ukuthi bangokhokho bezinja zohlobo lweSpitz.
Izinja ezifana neChows zabonakala kubumba lobukhosi bukaHan nemidwebo eyaqala ngonyaka ka-206 BC kuya ku-22 AD. Bazalelwa ukuzingela umdlalo nokuqapha impahla , futhi, ngezinye izikhathi ezingezinhle, lezi zinja zazisetshenziselwa ukudla futhi.
UChow Chows wayenjalo wayethanda futhi waziswa eChina ukuthi umbusi kwathiwa ungumnikazi wamaChows angama-5000 ngesikhathi sokubusa kwakhe.
Ngasekupheleni kwekhulu le-18, abathengisi baseBrithani baletha izinja zisuka eChina zaya eYurophu.
IChow Chow yathola igama layo kusuka ku igama le-pidgin-English abathengisi basebenzisa noma yini evela eMpumalanga.
Imvelaphi yeLabrador Retriever
AmaLabrador Retrievers abelokhu ekhona kusukela Ikhulu le-16 . Ekuqaleni bazalwa njengezinja ezisizayo kubadobi.
Okhokho baseLab banamuhla badabuka esiqhingini saseNewfoundland, eCanada. Amalebhu avela enjeni yamanzi yaseSt. John futhi alethwa eYurophu yizikhulu zaseBrithani.
Ngekhulu le-18, izinja ezinkulu zazifuyelwa ikakhulukazi inyoni yamanzi nokuzingela .
Ku-2017, iLabrador Retriever ithole indawo ephezulu ohlwini lwama-American Kennel Club lwezinja ezithandwa kakhulu e-US.
AmaLabradors aziwa nge ubuhlakani, ubungani, nobumnene obukhulu .
Igama elisheshayo ngezinja zabaklami
Njengoba sishilo ngaphambili, ukuxubana kweLabrador-Chow kunjalo inja entsha yomklami , yize kunomlando omude wezinhlobo zabazali bayo.
Kuthatha izinhlobo ezimbili ezingenacala ukwenza inja yomklami, evame ukwenziwa ukuhlanganisa i- izici ezihamba phambili yabazali bayo. Lokhu kunjalo neze-hybrid yeChow-Lab.
Abanye abathandi bezinja abaklami bathi lezi zinja ziphilile ngenxa yokwehluka kofuzo.
Yize bekungekho zifundo ezinkulu zokuqinisekisa lesi simangalo, lezi 'zinhlobo' zabaklami njengeChabrador noma kunjalo zijabulela ukuthandwa kulezi zinsuku ngenxa yokuvame kwazo ukubukeka okuhle futhi isimo esivumayo .
Ngeshwa, i-AKC ayiziboni lezi zinja njengezinhlobo ezihlukile.
Lab Chow umdlwane ( umthombo )
Umxube weChow Chow Lab ungabukeka njengokuxubana kwabazali bawo noma ube nezici eziningi zomzimba zohlobo oluthile lomzali.
Leyo yinto enama-crossbreeds; awusoze wabikezela ukuthi zizophuma kanjani.
Ake sihlole iLabrador neChow Chow ukuze sibe nombono wokuthi le hybrid ingabukeka kanjani.
ILabrador iyi inja enkulu enesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-55 kuye kwangama-80 (ama-24 kuye kuma-36 kgs) futhi angalinganisa phakathi kwamasentimitha angama-21 kuye kwangama-24 (amasentimitha angama-54 kuye kwangama-62).
Amalebhu anobuso obubukeka kahle inkulumo enomusa nenobungane . Beza ngemibala ehlukahlukene njengophuzi, omnyama noshokoledi, uboya babo bufushane futhi bukhulu. Izingubo zangaphansi zawo zithambile futhi ziyamelana nesimo sezulu ukuze zivikeleke emanzini.
Ngakolunye uhlangothi, amaChow Chows anjalo izinja ezincane kuya kweziphakathi nendawo , imi ngamasentimitha angu-17 kuye kwangama-20 (amasentimitha angama-43 kuye kwangama-50) ubude futhi isisindo samakhilogremu angama-45 kuye kwangama-70 (ama-20 kuye kuma-31 kgs).
Banayo amajazi aminyene futhi athambile lokho kungafika kumnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, isinamoni, ukhilimu, noma okubomvu.
Iningi lamaChows ane- ukuziveza , yize bebukeka ngobuqili. Izindlebe zazo zingunxantathu futhi zime mpo. Isici esiyingqayizivele seChow Chow ulimi lwaso oluhlaza okwesibhakabhaka noma olumnyama.
Ngabe i-Chow Chow Lab Mix iba nkulu kangakanani?
Ngokuya ngezinhlobo zayo zabazali, iLab Chow Mix incane ukuya ngosayizi omaphakathi, inesisindo esiphakathi Amakhilogremu angama-50 kuye kwangama-70 (22 to 31 kg) nokukala phakathi Amasentimitha angu-18 kuya kwangu-24 (Amasentimitha angama-45 kuye kwangama-60) ubude.
Iningi lama-Chabradors line- isifonyo esinde nenhloko efana neLabrador. Zivame ukuba namehlo ansundu kepha ezinye zingaba namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
Eziningi zalezi nzalo zinolimi oluhlaza okwesibhakabhaka-mnyama kumzali wazo weChow Chow.
Lezi zinja zingaba namajazi anemibala ehlukene, kusuka kokumnyama, okumhlophe, ne-blonde, kuya kobomvu noku nsundu. Imisila yabo imvamisa yinde futhi iyaphapha .
Isimo seLabrador neChow Chow sehluke kakhulu komunye nomunye, uma kungenjalo okuphambene ngqo.
Ukuhlanganiswa kweLab Chow kungathatha izici zomzali noma yini ukuze ube nomdlwane waseChabrador ngubani uthanda ukwangiwa nothando nomunye umdlwane ovela kudoti ofanayo ngubani ukude futhi kugodliwe .
Nayi ividiyo yemidlwane yokuxuba yeLabrador neChow Chow idlala:
Ake sibheke masinyane isimo seLab neChow Chow ukuthola umbono ongcono wokuziphatha kweLab Chow.
ILabrador Retriever enobungane, esebenzayo
ILabrador ithola u-A endaweni yobumnene. I-AKC ichaza amaLabhu njenge abangane abaphumayo nabanomoya ophezulu .
Bangabangane abaphelele be ukugijima, ukuhamba izintaba, nokubhukuda futhi banamandla nezemidlalo yokuba ngumngani wakho wokuzivocavoca.
Amalebhu aziwa ngawo ubuhlakani , futhi, futhi zivame ukusetshenziswa njenge izinja ezisebenzayo futhi izinja zensizakalo .
Lawa ma-canine angakhathali avame ukwenza imisebenzi yokusiza abanikazi bawo ezimpilweni zabo zansuku zonke.
IChow Chow ezimele, evikelayo
I-Chow ivame ukuchazwa njengenesithunzi. Bangaba njalo uxwaye abantu ongabazi futhi kungenzeka kungabekezeleli ezinye izilwane.
Lezi izi qotho izinja ezikhawulela ukuba sendaweni. Bangaba njalo nolaka uma ungaqeqeshiwe noma uhlanganyele nabantu abasha.
Kodwa-ke, noma ngesimo sabazali bayo, izici zomxube weLab Chow zizoya ngokuthi kungakanani ukuqeqeshwa kanye nomphakathi le nja ifika isencane.
Uma nje uqeqeshwe kahle, ungalindela ukuthi isiphambano sakho seChow Labrador sibe yinja enobungane, eqotho ukuvikela umndeni wayo .
Sonke sifuna izinja zethu zibe nokuphila okujabulisayo nokunempilo ngakho-ke kufanele sizinike ibhalansi elifanele lothando, ukunakekelwa, nokondleka okufanele.
Isiphambano seLab Chow sidinga umzamo omncane ngokwengeziwe maqondana nokunakekelwa, kepha umsebenzi uwufanele impela ngalezi zinhlobo ezihamba phambili ezithandekayo.
Ukugcina i-Chabrador yakho ibukeka kahle
Ungamangali uma lokhu kuqhekeka kudinga ukuzilungisa okungenani kanye ngesonto njengoba bobabili iLabrador neChow Chow benamajazi adinga ukunakwa.
Uma inja yakho izuza njengejazi leLab, a ukuxubha masonto onke kufanele yanele. Kodwa-ke, uma isilwane sakho sinoboya obukhulu beChow Chow, khona-ke ijazi laso lidinga ukunakwa okwengeziwe. Cabanga ukuxubha uboya bayo okungenani kathathu ngesonto ukuyigcina ingenantambo.
Ukuxubha njalo kuvimbela noboya ekuthuthukiseni amacansi, okungaba buhlungu esilwaneni sakho.
Lokhu okuhlangenwe nakho kwe-hybrid ukuchitheka kwesizini , kodwa lindela ukuthi noboya bezinja zakho buzokhipha njalo. Yiba nomshini wokuhlanza olungele ukususa izinwele eziminyene kukhaphethi wakho kanye nefenisha.
Yini ongondla ngayo le canines ethandekayo
ILabradors neChow Chows banezidingo ezihlukile maqondana nokusetshenziswa kwabo kokudla.
Ngenkathi amaLabhu aziwa nge isifiso sokudla esinganeliseki futhi bathambekele ekudleni noma yini abayinikiwe, iChow Chows idinga ukondliwa ngokuqapha okuthe xaxa.
AmaChows amaningi anakho izisu ezizwelayo ngenxa yomlando wabo. Njengoba kushiwo ngaphambili, lezi zinja zazithathwa njengokudla eChina yasendulo ngakho-ke zazinikezwa ukudla okufanayo nezinye izilwane ezifuywayo njengezinkukhu nezinkomo. Ama-chows ayephiwa isoya, ilayisi, futhi, kwesinye isikhathi, inhlanzi.
Ngenxa yalokhu kudla, lezi zinja zajwayela ukudla ukudla okulula ukwetyisa, ngakho-ke zingaba nobunzima ekugayeni amaprotheni noma inyama. Ukudla okuneprotheni ephezulu kunganikeza iChow Chow's izinkinga zesikhumba .
Endabeni yokuxubana kweLabrador Chow Chow, nazi izeluleko ezimbalwa zokuthi ungazondla kanjani nokuthi yini.
Cabanga ukondla inja yakho ukudla okuncane kepha okuvamile. Amfunze kathathu kuya kane ngosuku .
Hlanganisa. Amaprotheni ayimfuneko ekudleni kwenja, ikakhulukazi izinja ezisebenzayo njengeChow Lab. Ungangeza imifino noma irayisi.
Cabanga ngeminye imithombo yamaprotheni. Amaqanda kanye ne-cottage shizi yimithombo emihle yamaprotheni yale nja.
Khuluma nodokotela wezilwane wakho Mayelana nani ukudla ilungele inja yakho. Khumbula ukuthi izidingo zomdlwane ezikhulayo zihlukile kunenja endala. Izidingo zokudla okunempilo zenja esebenzayo nazo zizohluka kunaleyo ebuyiselwe emuva, ngakho-ke kungcono ngaso sonke isikhathi ukubuza kudokotela wezilwane uma kuziwa ekudleni kwenja yakho.
Yini izidingo zabo zokuzivocavoca?
Ungaba matasa kangakanani uma unquma ukuba nomnikazi we-Labrador Chow Chow hybrid?
Impendulo ithi: kakhulu. Lindela ukusebenzisa imali okungenani ihora nsuku zonke ekudlaleni okusebenzayo ngomxube wakho weLab Chow.
Badinga lelihora lokuzivocavoca usuku ngalunye ukuze bahlale besesimweni esihle somzimba.
Ukuzivocavoca kuzobasiza futhi ukuthi basebenzise wonke amandla abo we-pent-up.
Ukugijima, ukudlala ukulanda nokubhukuda impela yimisebenzi umfundi wakho azoyithokozela.
Awufuni ukuthi inja yakho ibhoreke ngoba lokhu kungabenza bathambekele ukungaziphathi kahle njengokuhlafuna ifenisha yakho.
Ngakho-ke qiniseka ukuthi uhlala ukulungele ukudlala nenja yakho ukuyigcina ivuselelwe ngokomzimba nangokwengqondo.
Le ndlela evundlile iyinja entsha entsha futhi akukho okuningi okurekhodiwe mayelana nezinkinga zabo zezempilo ezingaba khona. Ukuthola umbono ongcono ngempilo yale nja, kuyasiza ukubheka izimo le hybrid engaba nazo ifa kusuka ezinhlotsheni zomzali wayo:
Izinkinga zamehlo njengamehlo kanye ne-glaucoma
Ngokunakekelwa okufanele nokuvakashelwa njalo kudokotela wezilwane ukuyohlolwa, iChabrador inesikhathi sokuphila esilinganiselwe Iminyaka engu-11 kuya kwengu-13 .
Ukuqeqesha le hybrid esemncane kufanele nakanjani. Yize bekwazi ukuhlakanipha njengomzali wabo waseLabrador, banomkhuba ophakeme wokuzuza njengefa iChow Chow's inkani nenkani .
Akufanelekile ukubaqeqesha lapho sebekhulile. Ukulinda isikhathi eside kungaveza isimilo esingathandeki njenge ulaka futhi ukukhathazeka ngokweqile .
Isiphambano esingaqeqeshiwe seLabrador Chow singadla ifa lendawo yeChow futhi siqaphele abantu esingabazi nezinye izilwane abangazazi. Ukuxhumana nabantu kusenesikhathi kungakuchoboza lokhu kuziphatha ebhlameni.
Lindela ukuthi inja yakho ibe ne- ukunaka okulingene ngakho-ke ukuqeqeshwa kufanele kube nentshisekelo kubo ngaso sonke isikhathi. Ungavumeli iChow Lab Mix yakho ikuhehe ngamehlo ayo enja yezinja. Kufanele ungaguquguquki futhi uqine okwamanje ukuzola ngakho-ke ngeke ukhuthaze ukuziphatha okunolaka kusuka enjeni yakho.
Isinyathelo sokuqala sokuba nenja enhle nenempilo ukuyithola ku umfuyi ohlonishwayo .
Abafuyi abanemidlwane yokuxuba yeLabrador Chow abathengisayo kungaba yinselele ukuyithola, noma kunjalo.
Ungahlola laba bazalisi abagxila ezinhlotsheni zabazali babo.
I-Flaming Star Chows (EKentucky)
I-Dreamland Kennel (ITexas)
Ukubuyiswa Komfula iSky (Washington)
Ama-Y-Farm Kennels (ELouisiana)
I-Lab Chow mix puppy ibiza nxazonke $ 1000 . Lokhu kungenxa yokuthi zombili izinhlobo zabazali zivame ukuba sohlangothini olubizayo. Intengo yale midlwane nayo izoncika kozalo lwabazali bayo.
Uma ungenankinga ngokuthatha inja endala ekhaya, unga futhi ukwamukela enhlanganweni yezokutakula noma yokukhosela.
Izinja zokusindisa zivame ukuza ngentengo ephansi futhi uzokwazi ukunikeza ikhaya lenja engenandawo yokuya.
Ungahle angalindelekile ngokuya kokubukeka kwayo nobumnene bayo, kepha, kukonke, ungalindela ukuthi le hybrid ibe umngane onobungane, onothando futhi odlalayo .
Uma uthatha isinqumo sokuthola ukuxuba kweLab Chow, qiniseka ukuthi uchitha isikhathi esanele ku- ukuqeqeshwa ukuqinisekisa ukuziphatha okuhle kusuka esilwaneni sakho.
Ufuna futhi ukunaka ngokukhethekile izidingo zabo zokudla okunomsoco futhi uqinisekise ukuthi zikhona osebenzayo ukuvimbela isithukuthezi nokuthambekela okulimazayo.
Ingabe unayo i-Chabrador yakho? Singathanda ukuzwa izindaba zakho! Sitshele ngabo kumazwana abekiwe.
inja iyaqhubeka nokubamba umlomo futhi izama ukuphonsa phezulu
Unyaka owodwa obomvu we-pitbull
i-chihuahua jack russell terrier mix imidlwane
i-germany lab lab mix mix yabantu abadala